ALASKAN MALAMUTE DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Alaskan Malamute Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Knightmutes 'Kayla Team Yepa (Kayla), sawir qadarin leh Kaylatee Kennels
Alaskan Malamute waa kan ugu weyn eeyaha Arctic. Eygan qaro weyn, ee si fiican loo dhisay wuxuu ku adag yahay dabada duuban oo dhabarka lagu hayo. Madaxa ayaa ballaaran oo leh dhago kacsan. Indhuhu waa kuwo dhex dhexaad ah, midab madow oo mugdi ah oo yar, iyo yicib qaabaysan oo si badheedh ah loogu dhajiyay dhakada. Eygu wuxuu hayaa sawir yeey ah laakiin leh sharaf, muujinta macaan. Indhaha madow ayaa la door bidaa indho buluug ah waa cilad marka loo eego heerka qoran. Cagaha waa weyn yihiin, nooca barafka leh suuf adag. Jaakad qafiif ah, oo laba jibbaaran celcelis ahaan celcelis ahaan hal ilaa saddex inji oo dhererkeeduna wuxuu ku yimaadaa noocyo kala duwan oo cawl khafiif ah illaa hooskii dhexe ee madow, xarkaha iyo hooska midabka casaanka ah. Isku darka waxaa ka mid ah yeyda cirro, madow iyo cadaan, yey sable (jaakad casaan ah oo leh jaakad madow oo madow) ama casaan. Midabka kaliya ee adag ee la ogolyahay waa cadaan. Eeygu badanaa wuxuu leeyahay iftiimooyin mugdi ah mararka qaarkoodna wuxuu leeyahay maaskarad ama dabool mugdi ah. Lugaha iyo muuska marwalba way cad yihiin. Meelaha qaarkood, eeyaha waxaa laga yaabaa inay ka yar yihiin ama ka weyn yihiin heerka rasmiga ah.
Alaskan Malamute waa mid aad u daacad ah oo caqli badan, macaan badan oo kalgacal badan u haya sayidkiisa. Wanaagsan carruurta da'doodu ka weyn tahay inay si nabadgelyo leh ula ciyaaraan. Haddii dareenkeeda canine la daboolo, wuxuu ku bislaanayaa eey sharaf leh oo qaan-gaar ah. Waxay yihiin kuwo saaxiibtinimo leh sidaa darteedna kuma haboona sidii eeyaha ilaaliya . Malamutes waa kuwa ugu farxadda badan bannaanka illaa inta ay ka helayaan wehel ku filan, laakiin sidoo kale waxay ku raaxaystaan ​​ku noolaanshaha gudaha halkaas oo uu bini'aadamku ' xirmo 'ku nool yahay Iyadoo aan hoggaan adag iyo jimicsi maskaxeed iyo jimicsi maalinle ah , eeyahaani waxay noqon karaan waxyeello u geysata burburka , Ula dhaqmaya sida eey waaweyn, eeyo yar yar. Hal kiis, eey kaligiis ah ayaa baabi'iyay dhammaan qolka fadhiga ee alaabta guriga oo lagu qiimeeyay $ 15,000 saddex saacadood gudahood! Malamutes wuxuu jecelyahay nashaadaadka banaanka xitaa wuxuu sifiican ugu shaqeeyaa adeecida dhiiri galin adag. In kastoo ay noqon karto adag tahay in la tababaro Malamutes addeecid rasmi ah, si gaar ah uma adka in lagu tababaro inay noqdaan akhlaaq wanaagsan maxaa yeelay waxay jecel yihiin inay ku farxaan. Ragga aad ayey u awood badan yihiin. Noocani wuxuu u baahan yahay aadanaha ku hareeraysan inuu noqdo mid adag, kalsooni leh oo iswaafaqsan hoggaamiyeyaasha xirmada . Eeyaha qaarkood ayaa noqon kara adag tahay in guriga la dumiyo . Cunnadani waa mid quudhsata oo u baahan cunto ka yar intaad filan karto. Si kastaba ha noqotee waxay u muuqdaan inay hoos u dhigaan wax kasta oo la bixiyo, taas oo u horseedi karta cayil iyo buurnaan. Malamutes waa xasilloon yihiin marka loo eego eeyaha badankood laakiin waxay jecel yihiin inay cabaadaan oo qoddaan. Noocani waa in lagu kormeeraa agagaarka xayawaannada yaryar ee aan la aqoon, maadaama ay leeyihiin dareen ugaarsi xoog leh. Tani macnaheedu maaha inaysan ku fiicnayn xayawaanka yar yar qaar ka mid ah Malamutes ayaa caan ku ahaa inay soo kiciyaan yar yar yar oo iyaga u gaar ah. Labada jinsiba waxay la dagaallami karaan eeyaha kale, gaar ahaan jinsi isku mid ah iyo sinji iyo maarayn adag iyo tababar ayaa lagama maarmaan u ah in la xakameeyo tan. Bulsho ku habboon dadka iyo eeyaha kale waa lama huraan. Tababbarka adeecida ayaa si aad ah loogu talinayaa.
Miisaanka: Ragga 80 - 95 rodol (36 - 43 kg) Dumarka 70 - 85 rodol (32 - 38 kg)
Alaskan Malamute waa u nugul ubax , hip dysplasia iyo chondrodysplasia (dwarfism).
Alaskan Malamutes laguma talinayo nolosha guriga. Waxay si caddaalad ah ugu firfircoon yihiin gudaha waana inay lahaadaan ugu yaraan daarad weyn. Haddii aad ku nooshahay aagga hareeraha magaalada, xayndaab sare waa qasab, laakiin aaso salka, maxaa yeelay waxay u badan tahay inay qoddaan jidkooda looga baxo. Alaskan Malamute wuxuu jecel yahay inuu ku dhex wareego wuxuu u arko inuu yahay dhulkiisa. Jaakadda Malamutes ayaa u oggolaanaysa iyaga inay u adkeystaan ​​qabowga daran, laakiin ka taxaddar in eydu ku qaboojiso cimilada kulul. Hubso inay leeyihiin hoos iyo biyo qabow oo nadiif ah.
Malamutes wuxuu ubaahan yahay qadar jimicsi macquul ah oo ay kamid yihiin socod dheer maalinle ah . Laakiin ka taxaddar inaadan ku badin cimilada diiran.
Qiyaastii 12-16 sano.
4 ilaa 10 eey, celcelis ahaan 6 eeyo
Alaskan Malamute wuxuu leeyahay jaakad cufan oo ay tahay in la cadaydo laba jeer usbuucii. Noocani wuxuu si aad ah u daadiyaa. Koodhka hoose wuxuu ka soo baxaa buufis sanadkii laba jeer. Qubayska ayaa ah mid aan loo baahnayn, maadaama jaakaddu si fudud uskaga u daadineyso. Shaambo qalalan mararka qaarkood. Eygan waa nadiif oo ur ma leh.
Alaskan Malamute waa eey cirifka waqooyi ka soo jeeda oo ka soo jeeda Yeyda Arctic. Magaceedu wuxuu ka yimid Mahlemuts, oo ah qabiil Alaskan ah oo soo koray oo daryeelay eeyadan barafka quruxda badan. Asal ahaan waxaa adeegsaday 2000 ilaa 3000 sano kahor kuwani Mahlemuit Eskimos ee Alaska, eeyahaas aadka loo qiimeeyo waxay ahaayeen qaabka kaliya ee ay ku safri jireen. Eeyadan cajiibka ahi waxay leeyihiin xoog iyo adkaysi leh rabitaan ay ku shaqeeyaan. Waxay soo jiiteen oo keliya shixnadaha yar yar ee safarka, laakiin sidoo kale waxay soo jiiteen rar culus oo cunto iyo agab ah oo loogu talagalay dadka Arctic. Xirmooyinka Malamutes waxay ka qaybqaateen safarro fara badan, kuwaas oo si gaar ah loogu habeeyay adkaysigooda, dareenka jihada, iyo dareenka ur wanaagsan. Waxay u muuqdeen jilayaal aan la ilaawi karin sheekooyinka Jack London iyo Rudyard Kipling. Malamute wuxuu raacay Admiral Byrd safaro uu ku tagay Pole South. Alaskan Malamute waa ilma adeer oo leh noocyada Arctic Siberia Husky , Samoyed , iyo Ey Mareykan ah oo Eskimo ah . Qaar ka mid ah hibooyinka Alaskan Malamute waa dharbaaxayaal, gaari-gacmeed, goobid iyo samatabbixin, culeys jiidid iyo tartan.
Waqooyiga, AKC Shaqaynta
'Tani waa Shadow my Alaskan Malamute oo 6 bilood jir ah oo miisaankeedu yahay 80 rodol. Waa nin qurux badan. Wuxuu jecelyahay inuu ciyaaro oo banaanka joogo. Isagu waa sida qashinka oo kale wax walbana wuu cuni lahaa hadduu awoodo. '
Hooska Alaska Malamute ee 6 bilood jir culeyskiisu yahay 80 rodol.
Hooska u yeelo Alaskan Malamute sidii ey yar oo ah 6 toddobaad jir.
Eeg tusaalooyin badan oo ah Alaskan Malamute
Sawirada Alaskan Malamute 1
Sawirada Alaskan Malamute 2
Sawirada Alaskan Malamute 3
Sawirada Alaskan Malamute 4
Noocyada Ey Sled-ka
feeryahan isku qas bulldog american
11 wiig jir puppy puppy
schnauzer Ghadafi qasan SUNTZU shih
bulldog jir ingiriis ah oo lagu qasay pitbull